BAQSHIINKA DHADHANKA LEH GACMAHOODA: SAWIRADA CABBIRKA, SAWIRRADA SHIMBIRAHA - BEERAHA DIGAAGA
Sidee loo sameeyaa qafis loogu tala galay digaagada gacmahaaga? Sawirrada iyo sawirrada la dhamaystiray oo leh cabbir
Beerashada ma aha mid fudud sida ay u muuqato in qofku deggan yahay magaalada. Waxay u egtahay in khaladaadka yaryar ee dayactirka ama quudinta xayawaanka nool ay u horseedi karaan natiijooyin aan fiicneyn - jirro, kobcin xun iyo xitaa mora.
Horumarinta digaagga ee ukunta waa mid ka mid ah shirkadaha ugu faa'iidada badan beeraha, iyo baqshiishu waa guryaha digaagga ee faa'iido leh oo haboon. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in unugyada caadiga ah ee kiiskan aanu ku haboonayn, naqshadeynta waa in lagu takhasuso nooca hawlaha.
Qodobka taleefanka ee digaagada ukunta ganacsiga ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Sababaha wanaagsan ayaa waxaa ka mid ah:
farsameynta dhamaystirka nidaamka quudinta, waraabinta, nadiifinta unugyada iyo helitaanka badeecada lafteeda (taas oo ah, ukunta);
Aagga ayaa dhaqaal ahaan loo wada baabbi'iyey, tan iyo xitaa dhismaha yaryar waxaa suurtagal ah in la xoojiyo dhowr qaybood oo ka mid ah unugyada unugyada, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in lagu daro tiro badan oo xoolo ah;
way fududahay in la abuuro shuruudo ku haboon nolosha nafta dabiiciga ah ee shimbiraha - nalalka dabiiciga ah, dabaysha, kuleylka;
xaddiga quudinta ayaa la xakameynayaa, taas oo yareyneysa qiimaha wax soo saarka ugu dambeeya;
si aad ah loo fududeeyo xakamaynta gobolka ee shimbirta iyo habka loo fuliyo baaritaannada caafimaadka xoolaha, tallaalada iyo wixii la mid ah.
Caawin! Intaas waxaa dheer, tirada shaqaalaha ayaa sidoo kale hoos u dhacday, taas oo sidoo kale kaa caawineysa dhimista kharashka.
Si kastaba ha noqotee, oo ay la socdaan liis dheer oo faa'iido leh, nooca noocan ah wuxuu leeyahay qaar faa'iido darro ah. Marka la eego arimahan soo socda, waa in la muujiyaa:
qafis aan ku habooneyn waxay u horseedi kartaa dhibaatada digaaga ama waxyeello gaarta bacda ugu dambeysa;
sababtoo ah xaqiiqda ah in shimbirku uu ku jiro meel cidhiidhi ah, maaha mid u adkaysata cudurrada. Tani waxay sabab u tahay la'aanta (ama xitaa la'aanta) qorraxda iyo hawada cusub;
Kharashyada hannaanka caafimaadka xoolaha ayaa si weyn u kordhaya, gaar ahaan, fitamiino badan ayaa loo baahan yahay;
quudinta waa inay ahaataa midka ugu wanaagsan;
microclimate waa in si joogta ah loo xakameeyo qolka iyo heerkulka si mug leh waa in lagu hayaa.
Sidaa darteed, markaad isticmaasho nidaamkan, waa inaad wali haysaa meel hudheello u ah shimbiraha. Xaaladda ka soo horjeeda, tayada wax soo saarka asaasiga ah, iyo sidoo kale hab-nololeedka lakabka laftiisa, ma noqon doono heerka ugu sareeya.
Guud ahaan, nidaamka dhirta lafdhabarka ee la samaysan yahay ayaa si caddaalad ah loo siman yahay, laakiin waxaa jira farqi yar oo ka mid ah qaybaha qaarkood. Sidaa darteed, Noocyada unugyada soo socda ayaa loo tixgeliyaa:
oo leh dabacsanaan.
Caawin! Waxaa intaa dheer, waxaa jira noocyo qaabab ku saabsan tirada dhulka. Xaaladdan, waxay noqon kartaa laba-heer, saddex-heerar iyo in ka badan. Sida walxaha wax soo saarka, qoryaha iyo birta waxaa loo isticmaalaa halkan.
Shuruudaha loogu talagalay baqashada loogu talagalay geedka digaagga
Baqshi wanaagsan waa mid ka soo baxa shuruudaha oo dhan oo u oggolaanaya in shimbirku si haboon u kobciyo, taas oo dhab ahaantii, go'aamisa waxqabadka iyo tayada alaabta. Xadhigga waa in la galvanikaraa, laakiin waa ka fiicnaan haddii ay tahay bac quraafadeed.
Marka la eego qaababkaas, shuruudaha soo socda waa in la muujiyaa:
Cabbirta shabakada waa inay ahaato mid yar - sida shimbirta oo kaliya ay madaxa ku xoqdo. Jumlada oo dhan madaxa - for a pik 10 cm2, loogu talagalay shimbiraha yar yar 30 cm2, loogu talagalay adult weyn dhigista hen 60 cm2.
Intaa waxaa dheer, Sidoo kale waa in ay muujiso shuruudaha guud ee dhismaha kaas oo ka soo horjeeda unugyada leh unugyada:
qolku waa inuu noqdaa mid hawo wanaagsan leh;
iftiinka waa inuu noqdaa mid joogto ah - labadaba iyo dabiici ah;
heerkulka qolka leh unugyada waa in uu ahaado 22 darajo (udhigida 1-2 darajo ayaa loo ogol yahay);
Muddada saacadaha maalintii waa inay ahaataa ugu yaraan 16 saacadood.
Mabda 'ahaan, u hoggaansanaanta talooyinka noocan ah uma baahna xoog gaar ah ama kharashka maaddada.
MUHIIM! Dhaqangelinta habeynta, kiiskan, waa in aysan aheyn, sababtoo ah u hoggaansanaan la'aanta talooyinka waxay keeni kartaa natiijooyinka foosha xun - cudurka iyo maarada shimbiraha.
Isla markiiba waa in la ogaadaa in ay ka fiican tahay in la qaato qalabka xisaabinta iyadoo la marayo yar yar, sababtoo ah xaaladaha aan la filaynin ayaa laga yaabaa inay soo baxaan inta lagu jiro qalabka tooska ah.
Si aad u rakibtid qafiska waxay u baahan tahay qalabka soo socda:
mesh ama balaastik caag ah;
geesaha birta ah;
kuraasta iyo baararka qoryaha;
xaashida taarikada ama saxaarad caag ah;
qalab si loo xakameeyo fiilooyinka xadhigga ah ee looxa dhejiyay geedkii, nalka oo leh koofiyad ballaaran oo loogu talagalay rakibidda shabaqa.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad iibsato qaybaha cabitaanka iyo quudinta.
Sidee naftaada u sameysaa?
Ka hor intaadan si toos ah ugu soconin soo saarida barkinta, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo dhererkiisa iyo nooca dhismaha, iyo sidoo kale cabbirkiisa. Xisaabinta waa inay ku saleysnaato tirada shimbiraha marka loo eego shuruudaha kor ku xusan.
jigsaw ama hacksaw;
Bulgaariya si aad uhesho waraaqo duuban;
qalin-qori ama calaamad u leh calaamadaynta;
Mashiinka la jiido.
Baqshadaha Caracas waxaa inta badan laga sameeyaa baararka qoryaha, maadaama ay tahay midka ugu sahlan in la isticmaalo waana mid aan qaali ahayn. Xaaladaha qaarkood, faahfaahin ku saabsan sida loo xakameeyo qalabka nadiifka ama biraha ayaa la isticmaali karaa. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan dhismaha laftiisu wuxuu noqon doonaa mid aad u ballaaran, iyo mashiinka alxanka loo baahan yahay.
Kulankan waa sida sawirada iyo qiyaasaha
Cage-gaaga saarista digaagada, sawirada, sawirada.
Hawlgallada golaha kale ee xakamaynta ayaa ah qiyaastii sidan. (waxaanu isticmaali doonaa kafaris saddex qaybood oo leh laba qaybood oo cabbiraha soo socda - 1407 ilaa 1660 ilaa 700 mm):
Marka loo eego xajmiga baqashada ee geela iyo sawirka la soo xushay, maaddada waa la jaraa. Waxaan diyaarinnaa 4 bar oo leh dherer ah 1407 mm, 6 bar oo leh dherer 1660 mm, 4 bar oo dherer ah 700 mm. Dhammaadka darfaha alwaaxa waa in lagu nadiifiyaa xaashida ciidda ama mashiinka tufaaxa.
Laga soo bilaabo qaanadaha alwaax sawn ururiya. Si aad u xirto qaabka, isticmaal muraayadaha isku dhafan ee isku dhejisan - waxay u fiicantahay in la qaato labo shaashad is-xoqid ah xagal walba.
DIB U EEGIDDA! Dhinacyada derbiyada ee xuddunta waxaa lagu sii xoojin karaa geesaha dusha sare - gees walba waxay leedahay hal qalab. Guud ahaan, waxay qaadan kartaa qiyaastii 50 nalka.
Iyada oo hoosta qalfoofka qafiska waxaa lagu rakibay daaqad. Tani, inta badan, bar waxaa loo isticmaalaa 20 illaa 40 mm oo dherer ah 700 mm (7 gogo '). Sidoo kale qaabku wuxuu u socdaa dhulka. - hal kabo ayaa lagu xayeysiiyaa dhammaadka dhamaadka dabka.
Guud ahaan, waxaad u baahan doontaa 6 qiyaastii, lakiin waa inaad si fiican u qaadataa marinka. Ciddiyaha waa in aan loo isticmaalin, maaddaama bararku si fudud u furmi doono marka qaybta wax lagu xallinayo.
Goobta laftirka lafteeda lafteeda ayaa la sameeyey iyadoo la eegayo xajmiga dhulka (1407 ilaa 700 mm). Waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo shabakada oo leh muraayad isku dhafan oo leh madax ballaaran - midkiiba 5 sentimitir.
Cirifka hore ayaa loo duubay si loo sameeyo saxaarad. Si aad dhulka uga dhigto mid xoog badan, waxaad ku rakibi kartaa baararka qoryaha ee qaabka cirbadaha. Si kastaba ha ahaatee, geedka waa in lagu daaweeyo antiseptic.
Dhabarka iyo derbiga dhinaciisa ah ee jirku waa la isku dhex xiran yahay mesh. Qiyaasaha xajmiga - 1660 1407 mm, oo lagu daray 5-10 sentimitir, tan iyo geesaha ayaa la duubi doonaa. Cirifka shabakada (haddii ay jiraan) waa in si taxadar leh loo xoqo.
Xoojinta shabakada waxaa lagu sameeyaa iyada oo la isticmaalayo nabaro isku dhafan oo leh madax ballaadhan iyadoo la raacayo mabda'a isku midka ah sida kiisaska dabaqyada.
Ogaysiiska in darbiga dhabarka ah waxaad isticmaali kartaa warqad tufaax ah.
Qaybta hore waxaa loogu talagalay albaabka. Albaabka waxaa sidoo kale laga sameeyaa mishiinka 50 x 50 mm. Qaabdhismeedka, waxaad u baahan tahay laba baaro oo dhererkiisu yahay 470 mm iyo laba baararka 700 mm. Isticmaalida qalabka wax lagu duubo, waxaan isku xireynaa (hal qalab kasta dhinac kasta, wadar ahaan 4 gogo ').
On the dhamaystiran jir ah waxaan u fidiyo shabaq - at geesaha aan leexin iyo ku dhejin leh screws leh ballnet ballaadhan, midkiiba 2-3 santimitir kasta. Gawaarida dhejiska ah waxaa loo isticmaali karaa in la xiro albaabka.
Qaab daboolan - saqafka ayaa laga samayn karaa mesh ama qalajiye u adkaysta. Xaaladda kumbuyuutarka, qalabka waa in sidoo kale lagu daaweeyaa antiseptic. Kumburiga waa in la gooyaa cabbirada sida - 1409 ilaa 700 mm.
Waxaanu daboolnaa qaybta sare ee jirkana waxaanu ku dhejinaa nalka ama ciddiyaha yar yar. Xaaladda dambe, waxay qaadan doontaa boqolaal qalab, maadaama ay u baahan yihiin in lagu qaado tallaabooyin ah 1.5-2 centimeters. Markaad isticmaasho tuubo isdabajoog ah, waxaad raaci kartaa talaabada 2-3 cm, sidaas darteed waxaad u baahan tahay 40-50 qalab.
Nidaamka isku-xirka unugga waa dhammeystiran yahay. Hadda waxaad u baahan tahay inaad sameysid saxaarad-taraag, xajmiga kaas oo waafaqsan dhererka iyo dhererka blockka (taas oo ah, 1407 700 mm). Arrintan awgeed waa inaad isticmaashaa xaashida buugga, waxaa wanaagsan in lakabin karo geeska saxda ah ee qaabka gacanta lagu hayo.
Tani waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga feedhaha ka soo daadinta ciriiriga. Dhab ahaan arrintan ayaa lafteeda diyaar u ah. Waa lagama maarmaan in ka hor inta aan shimbiruhu degeynin waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro oo dhan labalabbixi dhammaan qodobbada jaangooyooyinka ee geesaha fiiqan, jajabyo, qoryaha ceeriin ah.
Feeders iyo khamriga
Quudinta waxaa laga samayn karaa kuraas la qorsheeyay ama tuubooyin polypropylene oo ah dhexroor ku filan. Xaaladda isticmaalka saldhig alwaax, algorithm ee shaqada waa sida soo socota:
Saddex xadhigood oo dhererka isku mid ah (1407 mm) waa in horay loo daaweeyaa sanduuq iyo antiseptic;
Saddex qaybood oo dhameystiran waa in lagu dhejiyaa nashqadaha galvanized iyadoo la qaadayo tallaabooyin qiyaas ah 3-4 cm (qiyaastii 50 xabbo oo qalab ah). Laga soo bilaabo dhamaadka dhejiyeyaasha.
Markaad isticmaasho tuubo, waa ku filan in la jarjaro qeybta hoose iyo geesaha si loo rakibo bareegyo gaar ah oo loogu talagalay tuubooyinka. Quudinta waxaa lagu rakibay kaararka ukunta qiyaasta 10-15 sentimitir. Waxaa lagu dhejin karaa xarigga galvanized ama qalab gaar ah meelaha meelaha baararka ah.
Sida kuwa cabta, dhismaha naqshadda ayaa ugu fiicansida kiiskan shimbiruhu marwalbo u leeyihiin biyo nadiif ah. Boogaha khamriga waa in lagu dhejiyaa gudaha qafiska, iyaga oo ku xiraya shabakadda leh silig ama harqaafka haragga.
Si aad u sameyso digaag si aad u dareento raaxo, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u daryeesho deegaankooda. Halkan waxaan ku soo bandhignaa talooyinka guud ee soo socda:
si loo nadiifiyo wakhtiga. Waa in la ogaadaa in xilliga qaboobaha hababka noocaas ah waa in la sameeyaa marar badan;
Cabitaanka iyo quudinta waa in si nidaamsan loo dhaqaa loona daaweeyaa antiseptic gaar ah si looga hortago cudurada faafa ee shimbiraha.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad la socoto mikroclimate qolka, si habboon u kala firdhin shimbiraha sida ay u dhaqmaan iyo kormeerida nafaqada buuxda ee digaagga.
Guud ahaan, samaynta qafis loogu talagalay dhadhanka gacmahaaga ma aha nidaam aad u adag. Waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo xisaabiyo oo loo gooyo walaxda. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqon kartaa inaad doorato sawir diyaar ah oo leh cabbir.
Heerka raaxada ee shimbiraha naftooda waxay ku xirnaan doonaan tayada dhismaha, sidaa darteed shaqada waa in si mug leh loo qabtaa.